Ny ho avy dia tsy mitera-doza ary tsy nisy toy izany | Martech Zone
Ny ho avy dia tsy manana asa ary tsy mbola nisy toy izany
Talata, Aogositra 2, 2016 Douglas Karr
Mila mijanona ny paranoia mikasika ny hoavin'ny faharanitan-tsaina artifisialy, robotika ary mandeha ho azy. Ny revolisiona indostrialy sy teknika rehetra teo amin'ny tantara dia nanokatra ny olombelona hanana fotoana tsy voafetra amin'ny fampiharana ny talentany sy ny fahaizany mamorona. Tsy hoe tsy manjavona ny asa sasany - mazava ho azy fa maty izy ireo. Saingy ireo asa ireo dia nosoloina asa vaovao.
Rehefa mijery ny biraoko aho anio ary mijery ny asantsika, dia vaovao daholo! Mijery aho ary manatrika ao amin'ny AppleTV, mihaino mozika amin'ny Amazon Echo izahay, nanamboatra rindrambaiko finday marobe ho an'ny mpanjifa izahay, manana programa infografika ho an'ny mpanjifa izahay, tamin'ity herinandro ity dia nanampy mpanjifa roa lehibe izahay miaraka amin'ny olana amin'ny fikarohana organika sarotra, izaho dia mamoaka an'ity amin'ny rafitra fitantanana atiny, ary mampiroborobo ny lahatsoratra amin'ny alàlan'ny media sosialy izahay.
Ny tena izy dia tsy nanonofy mihitsy aho na dia 15 taona lasa izay aza ny hanana maso ivoho nomerika manokana ary hanampy ny mpanjifa hitety marketing amin'ny Internet. Ny làlana mankamin'ny ho avy dia tsy mihalefy ary mihamalefaka kokoa, misokatra misimisy kokoa hatrany! Ny dingana tsirairay amin'ny automatisation dia mamela dingana vaovao amin'ny fivoarana sy ny fanavaozana. Raha manao foto-kevitra sy asa famoronana taonina ho an'ny mpanjifantsika izahay, ny ankamaroan'ny androntsika dia mandany data, manangana rafitra ary manatanteraka. Raha vitantsika ny mampihena ireo singa ireo dia afaka mamorona zavatra betsaka kokoa isika.
Mino aho fa ny fanamby ataontsika, indrindra ny Etazonia, dia ny mampianatra sy manomana ny mpianatsika amin'ny asa efa ho lany tamingana. Mila rafitra vaovao tanteraka isika hanomanana ny taranaka fara aman-dimby handehanany amin'ireo teknolojia vaovao ireo.
Ny fiainana kolonialy dia namolavola ity sary ity, Asa 15 izay tsy nisy 30 taona lasa izay. Rehefa mandinika ny lisitry ny asa sy ny karama salantsalany ianao, dia mariho ny isan'ny ao amin'ny media nomerika!
Tags: developer rindrambaikoBilaogeralehiben'ny polisy mihainofiainana kolonialyoperator droneho avySary torohaympandalina ny filaminanaasaseo manam-pahaizana manokanampitantana media sosialympamorona traikefa amin'ny mpampiasavirtoaly mpanampympandalina tranonkala
Farany, tonga ny fotoana hampiatoana ny WWW anao
Paikady marketing amin'ny atiny 7 izay mitaona ny fahatokisana sy ny fizarana